Agarsiisa argii galmee ammee ni hir'isa yookiin ni bal'isa. Xiyya sajootti aanee jiruu cuqaasi Guddissi kamshaa. banuuf
Dinqisiisuu (LibreOffice Toorii keessaa fi Mul'anno Islaayidii Guddisuu)
Mata duree islaayidii dhokataa mul'isa islaayidii ammee keessaa agarsiisa. Mata durreewwan mul'isa islaayidii ammee keessaa dhoksa, mata dureewwan islaayidii alaa sajoo Sadarkaa Duraa cuqaasi.
Qabxiiwwan Xixiqqoo Dhoksuu
Mata duree xiqqo, mata duree filatamee dhoksa. Mata duree xiqqoo dhokataan sarara gurracha mata duree fuulduratti argamuun agarsiisa. Sadarkaa gadaanaa mata dureewwanii mul'isuuf, sajoo Qabxii xiqqoo mul'isii cuqasi.
Qabxiwwan Xixiqqo dhoksi
Qabxii Xixiqqo mul'isi
Mata-dureewwan xixiqqoo mata-dureewwanii agarsiisa. Mata-dureewwan xixiqqoo mata-durichaa dhooksuuf, sajoo Qabxiiwwan xixiqqoo dhoksii cuqaasii.
Gurrachaa fi adii
Islaayidoota kee gurraachaa fi addii qofa mul'isa.
Gurraachaa fi Adii
Title is: Kabala Toorii